Gịnị bụ akpaaka ahịa ekwentị? | Martech Zone
eMarketer na-atụ aro na ndị na-eji ekwentị ịntanetị ga-abawanye site na Nde 32.1 rue nde 52.3 n'etiti 2015 na 2021 N'afọ gara aga naanị, mkpanaka eji naanị intaneti esiwo na 36.6 nde ndị ọrụ ruo 40.7 nde ndị ọrụ
Omenala dijitalụ ahịa na-ezubere iche maka ndị anyịnya desktọọpụ ọrụ; dị ka a N'ihi ya, o nwere adịghị ike na mobile-naanị ọrụ. N'ezie, otu akụkụ dị mkpa bụ njegharị ala ha. Nke ahụ bụ ebe akpaghị aka ahịa akpaka (MMA) batara.
Emere MMA iji rụọ ọrụ na mgbagwoju anya niile nke teknụzụ ekwentị. Ndị ọrụ ekwentị na-akpa àgwà dị iche iche ma chọọ ihe dị iche karịa ndị ọrụ desktọọpụ, na MMA nwere ike inyere gị aka ịkwalite mkpọsa gị maka ha. O nwere ike ime ọtụtụ ihe dịka otu akpaaka ahịa akpaaka. Nwere ike iji ya wuo ma kewaa ndepụta kọntaktị gị, hazie mkpọsa email, na-agba ọsọ nyocha, ma soro nyocha gị. Otú ọ dị, ike nke MMA bụ otu ọ si enyere ụlọ ọrụ aka ịre ndị ahịa ahịa kpọmkwem mgbe ha nọ na ekwentị ha. Amanda DiSilvestro, Ahịa
Usoro MMA nwere ike ịgụnye ịhazi usoro ịkwa ọkwa, ozi SMS, Near-Field Communications, Njikọ Bluetooth, wifi, na ozi ngwa na mgbakwunye na ozi ịntanetị.
Amanda DiSilvestro na-ebu amụma na akpaaka ahịa mkpanaka ga-adị ka ahịa ahịa akpaaka. Ọ na - agba ndị ụlọ ọrụ ume ka ha tụlee ịnabata akpaaka azụmaahịa mkpanaka ugbu a iji nweta uru dị ukwuu na ụlọ ọrụ gị. Jide n'aka na ị gụrụ akụkọ ya n'ụzọ zuru ezu na Emmanuel ma lelee ozi eserese ndị Salesforce kesara:
Tags: Amanda DiSilvestro kwuruBluetoothgeolocationna-ngwa ozimmaozi mkpanaka ngwaonye na-ebugharị ekwentịemail mkpanakaozi ederedeakpaghị aka ahịa akpakamobile push ahịamobile push ozina nso nso nkwukọrịtanfcinupụ oziizipu ozindị ahịainfographic ahịaSMSsms oziozi ederedeihekedu ihe bụ mmaKedu ihe bụ akpaaka ahịa ekwentị